သစ်တော်သီးပုံ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်လေးတွေက ဘယ်ဂါဝန်မျိုးနဲ့ လိုက်ဖက်သလဲ? - Lifestyle Myanmar
သစ်တော်သီးပုံ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်လေးတွေက ဘယ်ဂါဝန်မျိုးနဲ့ လိုက်ဖက်သလဲ?
ခါးနှင့် ပခုံးတွေဟာ တင်ပါးထက် ပိုသေးတယ်ဆိုရင် ပျိုမေတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သစ်တော်သီးပုံ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ တြိဂံပုံစံနှင့်လည်း ဆင်တူပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သစ်တော်သီးပုံ ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ ပျိုမေတို့နဲ့ ဘယ်ဂါဝန်မျိုးက လိုက်ဖက်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့ ဒေါင်လိုက်အစင်းပါတဲ့ ဂါဝန်ပါ။ အဲဒီဒေါင်လိုက်မျဉ်းတွေက အရပ်ကိုပိုရှည်သယောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။
သင့်မှာ သစ်တော်သီးခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိမယ်ဆိုရင် ရှာသင့်တဲ့ နောက်ဂါဝန်စတိုင်တစ်ခုက empire waist ဂါဝန်တစ်ထည် ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တော်သီးကိုယ်ထည်အမျိုးအစားမှာ ခါးက အကျဉ်းဆုံးဖြစ်ပြီး တင်ပါးက အကြီးဆုံးပါ။ empire waist ဂါဝန်က သင့်ခါးကို ပိုပေါ်လွင်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပြဿနာဧရိယာဖြစ်တဲ့ (တင်ပါး)ကိုလည်း အလိုအလျောက်ဖုံးကွယ်ပေးထားပါတယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဍန်နှင့် ပတ်သတ်လာရင် ‘အားနည်းချက်ကိုဖုံးပြီး အားသာချက်ကို ပေါ်လွင်စေတာက’ အမြဲလိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ပတ်ဂါဝန်တွေ ဝတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဂါဝန်တွေက customize လုပ်လို့ရတာကြောင့် ဘယ်ခန္ဓာကိုယ် အမျိုးအစားအတွက်မဆို ရွေးချယ်မှုကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနည်းဆုံး ပတ်ဂါဝန်တစ်ထည်တော့ အဝတ်ဗီဒိုထဲမှာ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
သင့်အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် နောက်ဂါဝန်တစ်မျိုးကတော့ အပေါ်နဲ့ အောက် အဆင်မတူတဲ့ ဂါဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ်စုံများစွာကို ရှာဖွေဖို့ခက်ခဲသော်လည်း သင်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အပေါ်တစ်ဝက်မှာ အဆင်ပါပြီး အောက်မှာ ပြောင်ကာလာပါတဲ့ ဂါဝန်တစ်ထည် (ဒါမှမဟုတ်) အပေါ်ပိုင်းကို ခပ်ရှုပ်ရှုပ်အဆင်နဲ့ အောက်မှာ ရိုးရိုးအဆင်ပါတဲ့ ဂါဝန်တစ်ထည် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဂါဝန်ဒီဇိုင်းမျိုးတွေက သင့်တင်ပါးတွေကို အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းစေတာကြောင့်ပါ။
နောက်တစ်ခုက သင့်မှာ သစ်တော်သီးပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုပြီးချပ်ရပ်လိုရင် လက်ဖောင်းဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဂါဝန်လေးတွေ ဝတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ခါးပတ်ပါတဲ့ ဂါဝန်ကလည်း empire waist လိုပဲ အတိအကျ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ခါးပတ်က သစ်တော်သီးခန္ဓာကိုယ်ပုံ အမျိုးသမီးတိုင်း ဝတ်ဆင်သင့်တဲ့ accessory ဖြစ်ပါတယ်။ ခါးကို ပေါ်လွင်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကိုလည်း ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
ခါးပတ်ဂါဝန်တွေက ပုံမှန်တစ်ဆက်တည်း ဂါဝန်တွေထက် ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အဝတ်ဗီဒိုထဲမှာ ခါးပတ်ပါတဲ့ ဂါဝန်အနည်းငယ် ဝယ်ထည့်ဖို့ (သို့) ရှိပြီးသားအဝတ်အစားကိုပဲ ခါးပတ်နဲ့ ဝတ်ဆင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ off-shoulder ဂါဝန်လေးတွေပါ ။ ဒါက သင့်ကို ခေတ်ဆန်ကြော့မော့စေပြီး ဆက်ဆီကျစေတဲ့ ဂါဝန်အမျိုးအစားပါ။
နောက်ဂါဝန်တစ်မျိးကတော့ A-line dresses တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂါဝန်ပုံမျိုးက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ပွပွယယလေးနဲ့ တင်ပါးဘယ်လောက်ကြီးလဲ/သေးလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းရခက်တာကြောင့် သစ်တော်သီးပုံ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက် သင့်တော်မယ့် ဂါဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက Fashion trends တွေဟာ အမြဲလိုလို တစ်ကျော့ပြန်ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းက ဖန်တီးထားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကနေ ထုတ်နုတ်ပြီး နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ဖက်ရှင်တွေဟာ တခြားခေတ်တွေရဲ့ အထူးခြားဆုံးသွင်ပြင်အချို့နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေက...